यी हुन मस्तिष्कलाई अत्याधिक विगार्ने १० काम, यस्ता काम कहिले पनि नगर्नुस जसले मस्तिष्कलाई विर्गान सक्छ ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
यी हुन मस्तिष्कलाई अत्याधिक विगार्ने १० काम, यस्ता काम कहिले पनि नगर्नुस जसले मस्तिष्कलाई विर्गान सक्छ ! जानी राखौ
Published :6December, 2018 7:45 am
शरीरलाई स्वस्थ राख्न मस्तिष्कलाई स्वस्थ्य राख्न अनिवार्य छ । तर हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने कतिपय गल्तीहरु छन्, जसले मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । आखिर, हामीले गर्ने दिनभरको त्यस्तो गल्ती के हो, जसले हाम्रो मस्तिकलाई विगार्न सक्छ । जानी राखौ :
निद्राको कमी : शरीर तथा मस्तिष्कको समग्र विकासका लागि पर्याप्त मात्रामा निद्रा आवश्यक छ । मस्तिष्कलाई ताजा र स्वस्थ्य राख्न दिनहुँ ७ वा ८ घण्टाको गहिरो निन्द्रा लिनुपर्छ ।
एक्लै बस्ने बान : एक्लै समय व्यतित गर्ने मानिसमा अल्जाइमरको सम्भावना बढ्ने गर्छ । एक्लै बस्ने बानीका कारण मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ ।
जंक फुडको सेव : प्राय जंकफुडमा अजिनोमोटोको प्रयोग गरिएको हुन्छ । आवश्यक्ता भन्दा बढी अजिनोमोटोको सेवनले मस्तिष्कलाई असर पार्छ । विशेषगरी, मस्तिष्कमा हुने न्युरोन रिसेप्टर्सलाई यसले असर पार्छ । जसका कारण टाउको दुख्ने, दुविधा बढ्ने, वान्ता हुने, पेट दुख्ने लगायतको समस्या हुने गर्दछ ।
ठूलो स्वर : लगातार घण्टौसम्म एयर फोन तथा हेड फोन लगाएर ठूलो स्वरमा गीत सुन्ने गर्नाले पनि मस्तिष्कका कोशिकामा असर पर्ने गर्छ । जसका कारण मस्तिष्कमा समेत असर पर्ने गर्छ । यसकै कारण अल्जाइमरको समस्या समेत हुने गर्छ ।
निस्क्रिय जीवनशैली : निस्क्रिय जीवनशैलीका कारण पनि मस्तिष्कमा नकारात्मक असर पर्ने गर्छ । विशेषगरी, निस्क्रय जीवनशैली भएमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग लगायतका समस्या निम्तने गर्छ । जसले मस्तिष्कमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।
धुमपान : धुमपान गर्नाले शरीरबाट कयौं हानीकारक रसायनहरु निस्कने गर्छ । यसले रगतलाई गाढा बनाइदिन्छ, जसले गर्दा मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार कम हुने गर्छ । साथै , मस्तिष्कमा अक्सिजनको प्रवाह समेत कम हुने गर्छ । मस्तिष्कमा अक्सिजन राम्ररी नपुगेमा मस्तिष्क विग्रने सम्भावना बढ्ने गर्छ ।
आवश्यक्ता भन्दा बढी खानाको सेवन : कयौ मानिसको बानी हुन्छ, खाना देख्नै नसक्ने । र, खाना देख्यो कि मनले थाम्नै नसक्ने । आवश्यक्ता भन्दा बढी मात्रामा खानेकुराको सेवनले केही समयका लागि जिव्रोले स्वाद त पाउला । पेटलाई पनि सन्तोष होला ।
विरामी हुदाँ काम गर्ने बानी : काम तथा पढाईको चापका कारण कयौ मानिस आराम गर्नै पनि विर्सने गर्छ । विशेषगरी, विरामी अवस्थामा शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा आराम नमिलेको खण्डमा मस्तिष्कले राम्रोसितले काम गर्न सक्दैन । परिणामस्वरुप मस्तिष्कमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।